Tsiadana : nahazo paompy ka afa-pahasahiranana | NewsMada
Hahazo tombontsoa ny olona 1 200 amin’ny fametrahana ny paompin-drano iraisana eny amin’ny fokontany Tsiadana izay natolotra ny mponina, omaly. 17, amin’izao fotoana izao, ny paompin-drano sy ny fotodrafitrasam-pidiovana ampiasain’ny mponina 15 433, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontany ao Tsiadana, Ravelomanantsoa Solofohery Harison. Fokontany iray amin’ny efatra nomena ny paompin-drano ny fokontany Tsiadana. Raha misy paompin-drano telo manampy ireo, tsy ho sahirana amin’ny rano intsony ny mpampiasa rano. 65%-n’ny mponina, avy amin’ny fianakaviana sahirana avokoa ka ilaina ny fisian’ny fotodrafitrasa iraisana tahaka izao. Niara-niasa ny minisiteran’ny Rano sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fanatanterahana ny asa. Nitady ny mpiray ombon’antoka ny minisitera ka nanohana ny asa ny tanora HVM ho an’ny fokontany efatra eto Antananarivo Renivohitra.
Misokatra amin’ny 5 ora maraina ka hatramin’ny 10 ora maraina ny paompy, ny hariva manomboka amin’ny 3 ora ny fandraisana ny mpantsaka ary mihidy amin’ny 6 ora sy sasany hariva. Vidiana ariary ny rano 1 l ary mitantana ny paompy ny fikambanana Tambatra.
« Ny distrikan’Andramasina no manana taha ambany indrindra amin’ny fahazoana rano madio ho an’ny distrika valo mandrafitra ny faritra Analamanga », hoy ny talem-paritry ny rano sy ny fahadiovana eto Analamanga, Ravaloera Antsatiana. Eo am-panatanterahana fanadihadiana hijerena ny isan’ny olona manana rano tonga ao an-tokantrano sy ny mantsaka eny amin’ny paompy iraisana ny minisitera amin’izao fotoana izao.